Madaxweyne Xasan Oo Safiirka Cusub Ee Denmark Ka Gudoomay Waraaqaha Aqoonsiga * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka guddoomay waraaqihiisa aqoonsiga safiirka Cusub ee Dowladda Denmark ay u soo magacaawaday Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha uu kulan kula qaatay xafiiskiisa safiirka Cusub Geert Agaard Andersen.
Sidoo kale inta uu socday kulanka ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo safiirka dowladda Denmark ee Soomaaliya Geert Agaard Andersen, waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dowladood iyo balaarinta taageerada ay Soomaaliya siiso dowladda Denmark, iyadoo kulanka ay ka qeyb-gashay wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadam.
Kulanka iyo guddoonka waraaqaha aqoonsiga Safiirnimo ka dib ayaa waxaa warbaahinta Qaranka la hadlay Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadam, ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay sida dowladda Denmark ay diyaar ugu tahay caawimaadda Soomaaliya, iyadoo safiirka ka howl-gala safaaradda Denmark ee Soomaaliyana ay soo magacaawday.
Sidoo kale safiirka Denmarka ee Soomaaliya Geert Agaard Andersen oo isagana warbaahinta Qaranka la hadlay ayaa tilamaamay in kulanka madaxweyne Xasan Sheekh uu la qaatay looga guddoomay waraaqihiisa safiirnimo, dhanka kale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka caawinayaan dhinacyada Ammaanka, Waxbarashada, iyo horumarinta dhismaha.
Bilowgii sannadkani ilaa iyo dhammaadkiisa ayaa dalalka Caalamka waxa ay si isdaba-joog ah Soomaaliya ugu soo dirayeen safiiradooda iyo Safaaradaha ay halkan ka furayaan, taasi oo muujineysa sida ay u soo xoogeysaneyso Kalsoonida caalamka uu ku qabo dowladda Federaalka ah, iyadoo Dowladda Denmark-na ay qeyb ka tahay wadamada sida joogtada ah u taageera Soomaaliya.